Tarkiin waraanashee deebistee haaraa gurmeessuufi
Monday, 25 July 2016 08:42
Finfinnee, Adoolessa 15, 2008 Tarkiin waraanashee deebistee haaraa gurmeessuuf akka jettu Pireezdaant Reesiip Xaayib Erdoohaan beeksisan.
Manni-maree Ittisaa Olaanaa Mootummaa ministira dhimma alaa biyyattiin hogganamuu fi ministira ittisaa fi qondaaltota olaanoo haammate waraanicha deebisee haaraa akka gurmeessudha Pireezdaant Eerdoohaan kan ibsan.
Yeroo gabaabaa keessattis gurmaa’insi haaraan kun ni-ifoomsama jedhaniiru.
Pireezdaantichi labsii yeroo ariifachiisaa ji’oota sadii labsame dheeressuuf maalumtuu nu hin-dhorku jedhaniiru.
Bulchiinsi Pireezdaantii Erdohaan yaalii mootummaa galagalchuu Fatullaah Gulan qindeesseera jedhame irratti hirmaataniiru jechuun kan shakke loltoota kuma 60 ol, poolisoota, abbootii-seeraa fi barsiisota hojiirraa ari’eera.(FBC)
More in this category: « Xiyyaarri Gibtsi bade Lammiilen Sudaan Kibbaa kuma 26 ol torbee 2tti biyya isaanii gadhiisanii ba’aniiru »
Torbe Kana 1716
Ji'a Kana 1716
01/05/07 irraa eggalee 3422887